အမေးအဖြေများ - ။ JINDONGCHENG လြှပျစစျကိရိယာ, LTD ။
သံလိုက် BOX နဲ့ Pan BRAKE 320E
သံလိုက် BOX နဲ့ Pan BRAKE 420E
သံလိုက် BOX နဲ့ Pan BRAKE 650E
သံလိုက် BOX နဲ့ Pan BRAKE 1000E
သံလိုက် BOX နဲ့ Pan BRAKE 1250E
သံလိုက် BOX နဲ့ Pan BRAKE 2000E
သံလိုက် BOX နဲ့ Pan BRAKE 2500E
သံလိုက် BOX နဲ့ Pan BRAKE 3200E
အချပ် Folder ကို
ပေါင်းစပ် SHARE ကွေး roll
တစ်ဦးကသင့်အနေဖြင့် workpiece တင်နိုင်ဖို့အတွက်အဓိကလက်ကိုင် (s) ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့သည်, clampbar အောက်မှာအတွက် clamping အပေါ် switch ကိုသင့်ရဲ့ sheetmetal workpiece ထား
အဆိုပါ clampbar ပူးတွဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမေး?
အသုံးပြုမှုများတွင်တစ်ဦးကအလွန်အစွမ်းထက်လျှပ်စစ်သံလိုက်ဆင်းကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာအမြဲတမ်းတွဲမပါပေမယ့်တစ်ဦးချင်းစီအဆုံးမှာနွေဦး-loaded ဘောလုံးကိုဖြင့်၎င်း၏မှန်ကန်သောအနေအထားတွင်တည်ရှိသည်။
ဤသည်အစီအစဉ်ကိုသင်တံခါးပိတ် sheetmetal ပုံစံမျိုးစုံဖွဲ့စည်းရန်နှင့်လည်းလျင်မြန်စွာအခြား clampbars မှဖလှယ်ဖို့ပေးနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကဒါဟာစက်အပြည့်အဝအရှည် 1.6 မီလီမီတာပျော့သံမဏိစာရွက်တင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာတိုတောင်းအရှည်အတွက်ထူတင်နိုင်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးက es, အ JDC Bende စက်သူတို့ကိုတင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါသံလိုက်သူတို့ကိုဖြတ်သန်းနှင့် sheet.It ပေါ်သို့ clampbar ချခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့အပြည့်အဝအရှည် 1.6 အပြည့်အဝအရှည်မီလီမီတာလူမီနီယံနှင့် 1.0 မီလီမီတာသံမဏိတင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
မေးသင်မည်သို့ပြုလုပ် Clamp စေသလဲ?
သငျသညျကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်ယာယီအစိမ်းရောင် "Start ကို" ခလုတ်ကိုကိုင်ထားရုံပါပဲ။ ဤသည်အလင်းသံလိုက် Clamp ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သငျသညျအဓိကလက်ကိုင်ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါသူကအလိုအလျှောက်အပြည့်အဝအာဏာကိုညှပ်ဖို့ switches ။
တစ်ဦးကသင့်အနေဖြင့်အဓိကလက်ကိုင် (s) ကိုဆွဲခြင်းဖြင့်ကိုယ်တိုင်ကွေးဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဤသည်သံလိုက်ရာအရပျတှငျကငျြးပခဲ့သော clampbar ၏ရှေ့အစွန်းပတ်လည် sheetmetal bends ။ လက်ကိုင်အပေါ်အဆင်ပြေထောင့်စကေးသင်တို့ရှိသမျှကြိမ်မှာကွေးရောင်ခြည်၏ထောင့်ပြောပြသည်။
မေးဘယ်လိုသင် workpiece လွှတ်ပေးရန်သလဲ?
သငျသညျအဓိကကတော့သံလိုက်ကိုင်တွယ်ပြန်လာသည့်အတိုင်းတစ်ဦးကအလိုအလျှောက်ကိုပိတ်ထား switches, နှင့် clampbar အဆိုပါ workpiece လွှတ်၎င်း၏နွေဦး-loaded တည်နေရာဘောလုံးအပေါ်ပေါ်လာမှာပါ။
မေးအဲဒီမှာ workpiece ၌ကျန်ကြွင်းကျန်နေတဲ့သံလိုက်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်လော
စက်ချွတ် switches တစ်ဦးကကျွန်တော်အချိန်, လက်ရှိ၏တိုတောင်းတဲ့ပြောင်းပြန်သွေးခုန်နှုန်းကအများနှင့် workpiece နှစ်ဦးစလုံး-magnetise ဖယ်ရှားမှလျှပ်စစ်သံလိုက်မှတဆင့်လှေတျတျောမူသည်။
အဓိက clampbar ၏တစ်ဦးချင်းစီအဆုံးမှာ Adjustments ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦး။ လေဆာရောင်ခြည် 90 °အနေအထားမှာတက်သည့်အခါဤအ clampbar ၏အရှေ့ဘက်နှင့်ကွေးရောင်ခြည်၏အလုပ်လုပ်မျက်နှာပြင်အကြားကွေးရှင်းလင်းရေးပွောငျးလဲ။
သာမန်သံမဏိပိုက်သို့မဟုတ်လှည့်လည်ဘား၏အရှည်န်းကျင်တဖြည်းဖြည်းအဆိုပါ sheetmetal ခြုံဖို့ JDC Bende စက်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦး။ စက်သံလိုက်ကဤပစ္စည်းများကို Clamp နိုင်ပါတယ်အလုပ်လုပ်တယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
မေးကဒယ်အိုး-ဘရိတ် clamping လက်ချောင်းများရှိပါသလား
တစ်ဦးကဒါဟာသေတ္တာများဖွဲ့စည်းဘို့အတူတကွပလပ်နိုင်သည့်ရေတို clampbar segments များအစုတခုရှိပါတယ်။
ရေတို segments များတည်နေရာကဘာလဲမေး?
clampbar ၏တစ်ဦးကအဆိုပါအတူတကွပလပ်အစိတ်အပိုင်းများအတွက် workpiece အပေါ်ကို manually တည်ရှိရပါမည်။ ဒါပေမယ့်တခြားဒယ်အိုးဘရိတ်နဲ့မတူပဲ, သင့်သေတ္တာများ၏နှစ်ဖက်န့်အသတ်အမြင့်၏နိုင်ပါတယ်။
မေးများအတွက် slot clampbar ကဘာလဲ?
တစ်ဦးကဒါဟာထက်နည်း 40 မီလီမီတာနက်ရှိုင်းသောရေတိမ်ပိုင်းဗူးခွံများနှင့်သေတ္တာများဖွဲ့စည်းအဘို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာတစ်ဦး optional ကိုအပိုအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်စံအတိုအစိတ်အပိုင်းများထက်သုံးစွဲဖို့မြန်သည်။
မေးဗန်း၏အဘယျအရှည်ကဒ်အထိုင် clampbar ခေါက်နိုင်သလဲ
တစ်ဦးကဒါဟာ clampbar ၏အရှည်အတွင်းတွင်ဗန်းမဆိုအရှည်ဖွဲ့စည်းလို့ရပါတယ်။ slot နှစ်ခုတစ်ခုချင်းစီ pair တစုံတစ်ဦးကို 10 မီလီမီတာအကွာအဝေးကျော်အရွယ်အစားတစ်မူကွဲများအတွက်ထောက်ပံ့, နှင့် slot နှစ်ခု၏ရာထူးဂရုတစိုက်အားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှအရွယ်အစားများကိုထုတ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီ။
တစ်ဦးကလျှပ်စစ်သံလိုက်အရှည်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကို 200 မီလီမီတာအဘို့အင်အား 1 တစ်တန်နှင့်အတူညှပ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ, 1250E က၎င်း၏အပြည့်အဝအရှည်ကျော်6တန်ချိန်အထိ clamps ။
အဘယ်သူမျှမတစ်ဦး, သံလိုက်မတူဘဲလျှပ်စစ်သံလိုက်အသက်အရွယ်သို့မဟုတ်သုံးစွဲဖို့မှုကြောင့်အားနည်းစေလို့မရပါဘူး။ ဒါဟာတစ်ခုတည်းကိုသာ၎င်း၏ magnetisation များအတွက်ကွိုင်တစ်ခုလျှပ်စစ်လက်ရှိပေါ်တွင်မူတည်ကြောင်းလွင်ပြင် High-ကာဗွန်သံမဏိလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ထောက်ပံ့ရေး mains ကဘာလဲမေးလိုအပ်သလဲ?
တစ်ဦးက 240 Volts ac ။ (ထိုမော်ဒယ် 1250E အထိ) သေးငယ်တဲ့မော်ဒယ်တစ်ဦးသာမန် 10 Amp ထွက်ပေါက်ကနေပြေး။ တက်မော်ဒယ်များ 2000E နှင့် 15 Amp ထွက်ပေါက်လိုအပ်ပါတယ်။
မေးကဘာလဲဆက်စပ်ပစ္စည်းသည့် JDC Bende စက်နှင့်အတူစံအဖြစ်ငှါလာသလော
တစ်ဦးကအဆိုပါရပ်တည်ချက်, backstops full-အရှည် clampbar တို clampbars အစုတခုနှင့်တခုလက်စွဲစာအုပ်အားလုံးထောက်ပံ့ကြပါတယ်။
ရရှိနိုင် sheetmetal ၏ဖြောင့်ပုံပျက်-အခမဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်းများအတွက်လမ်းညွှန်နဲ့ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ clampbar ပိုမိုအဆင်ပြေရေတိမ်ပိုင်းသေတ္တာများဖွဲ့စည်းများအတွက် slot clampbar နှင့်ပါဝါပြတ်တောက်အားပါဝင်သည်။
မေး Delivery နေ့စွဲ?
တိုင်း modle စတော့ရှယ်ယာထဲမှာကျနော်တို့ ASAP သင်တို့ဆီသို့ရေကြောင်းစီစဉ်နိုင်ပါတယ်ပါပြီ
320E: 0.5mx 0.31mx 0.28m = 0.053m³ @ 30 ကီလိုဂရမ်
420E: 0.68mx 0.31mx 0.28m = 0.06m³ @ 40 ကီလိုဂရမ်
650E: 0.88mx 0.31mx 0.28m = 0.08m³ @ 72 ကီလိုဂရမ်
1000E: 1.17mx 0.34mx 0.28m = 0.11m³ 110 ကီလိုဂရမ် @
1250E: 1.41mx 0.38mx 0.33m = 0.17m³ 150 ကီလိုဂရမ် @
2000E: 2.2mx 0.33mx 0.33m = 0.24m³ 270 ကီလိုဂရမ် @
2500E: 2.7mx 0.33mx 0.33m = 0.29m³ 315 ကီလိုဂရမ် @
3200E: 3.4mx 0.33mx 0.33m = 0.37m³ 380 ကီလိုဂရမ် @
Powered 650: 0.88mx 1.0mx 0.63m =0.55³@120kg
Powered 1000: 1.2mx 0.95mx 0.63m =0.76³@170kg
Powered 2000: 2.2m x0.95m x ကို 1.14m =2.40³@360kg
Hems, မဆို-angle ကွေး, လိပ်အနား, နံရိုး, ပိတ်သည်လိုင်းများ, သေတ္တာ, Interrupt ခြံ, နက်ရှိုင်းသောလိုင်းများ Stiffening, ကွေးပြန်သွား, နက်ရှိုင်းသောအယပ်
သမားရိုးကျ sheetmetal benders ထက် 1. အများကြီး သာ. ကြီးမြတ်ဘက်စုံသုံး။
4. အလိုအလျောက် Clamp နှင့် unclamping ပိုမြန်စစ်ဆင်ရေးလျော့နည်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်ကိုဆိုလိုသည်။
ရောင်ခြည်ထောင့်5တိကျမှန်ကန်သောနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အရိပ်အယောင်။
ထောင့်မှတ်တိုင်6လျင်မြန်စွာနှင့်တိကျမှန်ကန် setting ကို။
7. Unlimited လည်ချောင်းနက်ရှိုင်း။
အဆင့်ကွေး 8. Infinite အရှည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
10. စက်များရှည်လျား Bende များအတွက်အဆုံးမှအဆုံးသို့ ganged နိုင်ပါသည်။
11. စိတ်ကြိုက် Tool (အထူး Cross-အပိုင်းညှပ်ဘား) မှအလွယ်တကူ adapts ။
12. ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ် - စက်ပိရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
မေး Applications ကို
ကျောင်းစာအုပ်စီမံကိန်းများကို : tool ကိုသေတ္တာများ, letterbox, မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း။
အီလက်ထရောနစ် : ကိုယ်ထည်, သေတ္တာများ, ထိန်သိမ်း။
အဏ္ဏဝါ fittings ။
Office ကိုစက်ကိရိယာများ : စင်ပေါ်, ဗီဒို, ကွန်ပျူတာ-တစ်ခွင်။
စားနပ်ရိက္ခာအပြောင်းအလဲနဲ့ : stainless နစ်မြုပ် & ခုံတန်းလျားထိပ်, အိပ်ဇောတစုံတရာပေး, သီး။
illuminated ဆိုင်းဘုတ်များ & သတ္တုထိုစာလုံး။
အပူပေးစက် & ကြေးနီမြတ်သော။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှု : ရှေ့ပြေးပုံစံ, ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းများ, စက်ပစ္စည်းအဖုံးများ။
လျှပ်စစ် : switchboards, ပူးတွဲအလင်း fittings ။
မော်တော်ကား : ပြုပြင်ရေး, ခရီး, ဗန်အလောင်းတွေ, ပြိုင်ကားကားများ။
စိုက်ပျိုးရေး : စက်ယန္တရား, bins, လမ်းခွဲ, stainless နို့ထွက်ပစ္စည်းကိရိယာများ, သွန်းလောင်း။
အဆောက်အဦး : Flash, facias, ကားဂိုဒေါင်တံခါးများ, shopfronts ။
ဥယျာဉ်တော်ကိုသွန်း, ဖန်-အိမ်များ, ခြံစည်းရိုးရေးသားချက်များ။
လေအေးပေးစက် : ပြွန်, အကူးအပြောင်းကိုအပိုင်းပိုင်း, အေးမြအခန်းပေါင်း။
မေးအဆိုပါထူးခြားသော centerless ဝင်းပတ္
သော JDC Bende ™များအတွက်အထူးသဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးပြီ, အကွေးရောင်ခြည်၏အရှည်တစ်လျှောက်တွင်ဖြန့်ဝေနေကြသည်နှင့်, အရှင်, အ clampbar လိုပဲသူတို့အထူး centerless အတူသံလိုက် Clamp ၏ generated.The ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းလမ်းများအရင်းဖြစ်ကြောင်းအဘယ်အရပ်မှအနီးကပ်ကွေးဝန်ယူ အဆိုပါ JDCBEND ™ဟာအလွန်မြင့်မားတဲ့အစွမ်းသတ္တိကို-to-အလေးချိန်အချိုးနှင့်အတူတစ်ဦးသည်အလွန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်း, အာကာသချွေတာ, စက်ကြောင်း။
အဆိုပါ workpiece တည်နေရာများအတွက်
မေး slot clampbars
လျင်မြန်စွာခေါက်-Up ခက်ခဲပုံစံမျိုးစုံကိုကူညီသံမဏိကိုအပိုင်းပိုင်းအနေဖြင့်လုပ်ရမည်နိုင်ပြီး, ထုတ်လုပ်မှုအလုပျအတှကျစံ clampbars အထူးကိရိယာဖြင့်အစားထိုးနိုင်ပါသည်။
မေး Operating လက်စွဲစာအုပ်
အပြည့်အဝ Clamp ဖြစ်ပေါ်ရှေ့တော်၌ဘေးကင်းလုံခြုံ Pre-clamping အင်အားသုံးလျှောက်ထားသည်ကိုသေချာမယ့်နှစ်လက်လျှပ်စစ် interlock နေဖြင့်တိုးမြှင့်ထားသည်။
မေး OEM နှင့်လိမ္မော်ရောင်
ကျနော်တို့စက်ရုံဖြစ်ကြောင်း, ငါတို့ OEM နှင့်လိမ္မော်ရောင်ကိုလက်မခံ, ငါတို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်း, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်ဤမျှလောက်များစွာသောကုမ္ပဏီများနှင့်ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတည်ဆောက်ရှိသည်။
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ငါ့ကိုသင်ကလိုအပ်တယ်ဆိုရင်, ကိုယ့်ကိုသင်ပို့ပါလိမ့်မယ်သိစေ, အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ရှိသည်။
မေးသင်သည် USA တွင်မဆိုအေးဂျင့်များပါနဲ့။
ဟုတ်သည်, ကျွန်တော်တို့သည်ငါ့ကိုသင်သည်မည်သည့်အကူအညီလိုလျှင်, ကိုယ့်ကိုသင်အဆက်အသွယ် Tel NO ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်သိစေပြီ။
အန္န Luo အဘိဓါန်